खराब खबरको पर्खाइमा « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:०४
शिशुलाई आकस्मिक कक्षमा छाडेर, क्यास काउन्टरअगाडि उभिएँ । काउन्टरवाला भन्न थाले बिरामी रजिस्टर गरेको पाँच सय, ३० हजार धरौटी । बेड चार्ज परनाइट ३५ सय, बच्चालाई मेसिन चलाएको छुट्टै चार्ज । कम्तीमा तीन पटक डाक्टर राउन्डिङमा आउँछन् त्यसको छुट्टै फि, …………. । यस्तै यस्तै अरू पनि के के भन्दै थिए । सबै कुरा बुझ्न सकिएको थिएन । मनमनमा हिसाब गरिसकेको थिएँ, तैपनि सोधें– त्यसो हो भने दिनको कति जत्ति खर्च आउँछ त ? यसै भन्न सकिन्न, ७ देखि १० हजार आउला ।